Qalabka M2 wuxuu ku imaan doonaa MacBook Air oo leh midab cusub Waxaan ka socdaa mac
Qalabka M2 wuxuu ku imaan doonaa MacBook Air oo leh midab cusub
Jordi Gimenez | | MacBook Air, Xanta
Waxay u muuqataa in shirkadda Cupertino aysan qorsheyneynin inay soo bandhigto processor-rada cusub ee M2 ee loogu talagalay MacBooks iyo xanta cusub ee ay sii deysay "Dylandkt" waxay muujineysaa in Apple ay ka fikireyso inay soo saarto qalabkan cusub oo leh cusbooneysiin MacBook ah marka la eego midabada. Naqshadeynta wax badan iskama beddeli doonto Hawada cusub laakiin waxay ku dari doontaa sida ku cad tan waxaa lagu sifeeyay processor Apple Silicon cusub iyo midab cusub.
Dareenkan, waxaan aragnay warar xan ah isbuucyo dhowr ah oo ku saabsan imaatinka processor-ka dhexdhexaadka ah ee kooxaha 14 iyo 16-inch Pro, oo loo yaqaan M1X ama wax la mid ah, laakiin xanta uu bilaabay isticmaalehan ayaa muujineysa in isbedelada imaatinka ilaa nuska hore sanadka soo socda, oo leh dib u cusboonaysiin MacBook ah gudaha iyo dibaddaba.
Marka waxay u egtahay inaan sii joogi doono iyada oo aan wax laga beddelin MacBook Pro oo ka bilaabi kara Apple ka hor dhammaadka sanadka (had iyo jeer dhegeysta wararkan ugu dambeeyay) ee socda. Xaaladdan oo kale, tweet-ka la bilaabay waa mid cad, M2s cusub nuska hore ee sanadka soo socda iyo midab cusub:
Kaliya waxaan rabay inaan la wadaago faahfaahinta goorta laga filayo jiilka soo socda M2 (maahan M1X oo loogu talagalay qalabka Pro Mac). Processor-kani wuxuu ku socdaa wadadii uu ku sii deyn lahaa qeybta hore ee 2022-ka oo uu weheliyo midabka soo socda ee Macbook (Hawada)
Xaaladdan oo kale xanta ay bilaabeen adeegsadaha Dylandkt maahan mid gebi ahaanba cusub oo waa in dhowr toddobaad ka hor caan ka ah Jon Prosser, sidoo kale sheegay in jiilka soo socda ‌MacBook Air‌ uu yeelan doono dib-u-habeyn dhammaystiran, noocyo kala duwan midabbo la mid ah waxa aan ka arki karno iMac-ka cusub iyo ‌M2‌ chip.
Dylandkt wuxuu dhawaan ku garaacay calaamadda dhowr shey oo Apple ah oo la bilaabay. Bishii Nofeembar ee 2020, Dylandkt wuxuu ku andacooday in jiilka soo socda iPad Pro ay ku jiri doonaan M1 chip. Tani waxay ahayd shan bilood ka hor inta aaladda la soo saarin waana sax ahayd. Kahor intaan la bilaabin 24-inch ‌iMac‌ horaantii sanadkan, Dylandkt wuxuu saadaaliyay in iMac uu heli doono naqshad cusub oo M1 ay ku dari doonto ...
Waan arki doonaa haddii ay ku saxsan tahay kiiskan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Qalabka M2 wuxuu ku imaan doonaa MacBook Air oo leh midab cusub
Alaab-qeybiyeyaasha Apple ee Fiyatnaamiis ayaa ku qasbaya shaqaalahooda inay seexdaan ciriiri badan si looga fogaado is-qaadsiinta
Ka taxaddar Phishing oo ka soo gala degel kasta